kudzidza - ALinks
January 18, 2022 Shubham Sharma Saudhi Arabhiya, kudzidza
Ndeapi mayunivhesiti akanakisa muPakistan?
January 17, 2022 Demi Pakisitani, kudzidza
Best mayunivhesiti muGermany
December 18, 2021 Demi Jerimani, kudzidza
Germany ine mukurumbira pamabhezari uye mishoma fizi yechikoro. Nyika iyi ndeimwe yeakanakisa asiri-anglophone yekuenda yezvidzidzo. Chekutanga pane zvese, kana iwe uchida kudzidza kuGerman saka unofanirwa kutarisa mune zvakanakisa
November 22, 2021 Shubham Sharma chikoro, kudzidza, Teki
Turkey inyika iri pamakondinendi ese eAsia neEurope. Ruzhinji chikamu chenyika chiri kuWestern Asia paAnatolian peninsula. Hupenyu hwekugara muTurkey hwakanyanya kunaka, saka kana uri kuronga
Ndeapi mayunivhesiti epamusoro muTurkey? Nhungamiro inokurumidza yemunhu wese
November 21, 2021 Shubham Sharma kudzidza, Teki
Iwo mayunivhesiti eTurkey akaiswa munhamba zvichienderana nezvinzvimbo zvawo muyese Best Global Universities mazinga. Zvikoro zvakaongororwa zvichibva pakuita kwazvinoita tsvagiridzo uye kuyerwa kwavo nenhengo dzenharaunda yevadzidzi mudunhu nenzvimbo dzakatenderedza.
Dzidzo Ndeyevose, Heano epamusoro 5 maYunivhesiti muDenmark
November 21, 2021 Demi Dhenimaki, kudzidza
Dzidzo muDenmark inomanikidzwa kune vana vari pasi pemakore gumi nemashanu kana gumi nematanhatu. Asi hazvimanikidzwa kuenda kuFolkeskole ("chikoro cheveruzhinji"). Makore echikoro kusvika zera regumi neshanu / gumi nematanhatu anowanzozivikanwa seFolkeskole kubvira chero